Icandelo loLwimi - CPUT
ICandelo Lolwimi eliphantsi kweZiko elijongene noPhuhliso leMfundo ePhakamileyo, eliyi-Fundani Centre for Higher Education Development,licandelo lokuqinisekisa ukuba umgaqo wolwimi weYunivesithi yeNcam yeKapa yeTekhinoloji (CPUT) uyasebenza. Liphantsi kweKomiti yoLwimi yeSinethi (SLC). Xa lisenza umsebenzi walo lithwala noxanduva lwalo ngokwegunya leSinethi (SLC), icandelo linyanzelekile ukuba zonke iinkqubo zokusebenza komgaqo liziququzelele kwiziko lemfundo lilonke lithathela ingqalelo yonke imisebenzi yolawulo neyezemfundo eCPUT.
Injongo yokuqala: Ukusetyenziswa komgaqo wolwimi
Ukunika intsingiselo kubungangamsha nemithetho yomgaqo wolwimi ngelixa iilwimi zisetyenziswa ngokulinganayo ngokusetyenziswa kweelwimi ezininzi kuninzi lwazo zonke izinto ezenziwa eyunivesithi.
Injongo yesibini: Iinkonzo ezixhasa iilwimi
Ukucebisa nokubonelela ngeenkonzo ezixhasayo zolwimi ezinobungcali kwifakhalthi nakumasebe, kwiinkonzo ezixhasayo nakwiSigqeba esiLawulayo ukwenzela ukufikelela ngokupheleleyo kwingcaciso ngolawulo, ngezemfundo nakwezinye iinjongo jikelele.
Injongo yesithathu: Ukufundiswa koluntu nokwazisa
Ukusungula nokuqalisa ukufundiswa koluntu namanyathelo okwazisa kusetyenziswana namaziko achaphazelekayo noluntu oluthetha ezo lwimi ukwenzela ukuqinisa ukuphuhliswa kolwimi, ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi neenkcubeko ezininzi eCPUT.
Injongo yesine: Ukuphuhlisa ukufundisa, ukufunda nophando-lwazi
Ukwenza igalelo elililo ekuvelisweni nasekugcinweni kolwazi ngaloo ndlela libe likhaya lokufundisa nokufunda ngeelwimi ezininzi nophuhliso lophando-lwazi ezi zizinto eziza kunceda abafundi nabahlohli abankcubeko zahlukeneyo. Lo nto iya kuthi ixhobise kwaye iphakamise igama leelwimi zaseAfrika njengeelwimi zobungcali ekufundeni nakwitekhinoloji, kwezemfundo nakuphando-lwazi eCPUT nakwamanye amaziko emfundo ephakamileyo, ndawonye noluntu ngokubanzi.
Injongo yesihlanu: Ukubeka elisweni nokuhlola
Ukubeka elisweni nokuhlola isantya ekuhamba ngaso ukusebenza kwezinto neenkqubo eziphathelele kulwimi nto leyo eya kwenza kujongwane ngqo nemingeni ekungenzeka ukuba ibambezela inkqubela.